Gabar u dhalatay UK oo guursatay eeygeeda, waxayna sharraxday sababta ka dambeysa go’aankeeda (Yaabka dunida) – Filimside.net
Mid ka mid ah dhacdooyinka ugu yaabka badan adduunka ayaa lagu arkay xaafadda Brixton ee dhacda Koonfurta London ka dib markii gabar degan xaafaddaas ay guursatay eeygeeda.
47 sanno jirtaan waxaa lagu magacaabaa Amanda Rodgers, waxaana xusid mudan inay 20 sanno ka hor nin guursatay, si kastaba ha ahaatee, xiriirkooda ayaa qaab nasiib darro ah usoo dhammaaday dhowr bilood ka dib.
Wixii intaas ka dambeeyey Amanda Rodgers ayaa kasoo horjeeday aragtida ah inay dumarku noloshooda oo dhan ku aaminaan ragga oo ay jaceyl xad dhaaf ah siiyaan. Waxayna ugu dambeyn go’aansatay inay jaceyl u qaado eygeeda oo ay guursatay.
Amanda ayaa daaha ka qaaday in sababta ay eygeeda u guursatay ay tahay inuu leeyahay astaamaha ay uga baahan tahay lammaanka ay nolosheeda u raadineysay, waxayna tiri: “Eygeyga Sheba muddo dheer ayuu ila noolaa, wuu iga qosliaa, wuuna iga farxiyaa, sidaas darteed maadaama uu farxad i siiyo marka aan murugsanahay isaga oo keliya ayaan u baahanahay”.
Arooskaan ayaa u dhacay sida aroosyada caadiga ah ee Galbeedka, Amanda ayaana jilbaha ku istaagtay isla markaana faraanti u gelisay eygeeda Sheba. In ka badan 200 shaqsi ayaana arooskaan kasoo qeybgashay.